Xulka Qaranka Bangladesh oo ka badbaaday weerarkii masaajidka New Zealand - Somali
Xulka Qaranka Bangladesh oo ka badbaaday weerarkii masaajidka New Zealand
Madaxweynaha Turkiga oo cambaareeyay weerarka masaajidka
Madaxda caalamka ee ka falceliyay weerarka lagu qaaday masaajidda
Booliiska London oo sare u qaaday ammaanka masaajidda
Dhimashada masaajidka New Zealand oo 49 maraysa
Posted at 13:00 15 Maarso 201913:00 15 Maarso 2019
SAWIRRO: Baroor diiqda iyo falcelinta weerarkii New Zealand
Munir Uz Zaman/AFP/Getty ImagesCopyright: Munir Uz Zaman/AFP/Getty Images
Muslimiinta Bangladesh ayaa dibadbax ay weerarkan ku cambaareynayaan ku sameeyay magaalada DhakaImage caption: Muslimiinta Bangladesh ayaa dibadbax ay weerarkan ku cambaareynayaan ku sameeyay magaalada Dhaka
Dibadbaxa ayaa la dhigay salaaddii jimcaha ka horImage caption: Dibadbaxa ayaa la dhigay salaaddii jimcaha ka hor
Indranil MukherjeeAFP/Getty ImagesCopyright: Indranil MukherjeeAFP/Getty Images
Muslimiinta Mumbai ayaa sidoo kale dhigay dibadbax lagu cambaareynayo weerarkaImage caption: Muslimiinta Mumbai ayaa sidoo kale dhigay dibadbax lagu cambaareynayo weerarka
Sabir Mazhar/Anadolu Agency/Getty ImagesCopyright: Sabir Mazhar/Anadolu Agency/Getty Images
Sidoo kale waxay mudaharaadyo ka dhaceen magaalada Karachi ee dalka PakistanImage caption: Sidoo kale waxay mudaharaadyo ka dhaceen magaalada Karachi ee dalka Pakistan
Marty Meville/AFP/Getty ImagesCopyright: Marty Meville/AFP/Getty Images
Ubaxyo ayaa la hor dhigay masaajidka la weeraray ee ku yaalla caasimadda New Zealand ee WellingtonImage caption: Ubaxyo ayaa la hor dhigay masaajidka la weeraray ee ku yaalla caasimadda New Zealand ee Wellington
Posted at 12:32 15 Maarso 201912:32 15 Maarso 2019
Kooxda kubbadda Cricket-ka ee dalka Bangladesh ayaa si dirqi ah uga badbaaday weerarkii lagu qaaday masaajidka Christchurch ee dalka New Zealand, gaar ahaan masaajidka Al Nuur.
Maamulaha kooxda Khaalid Mascuud ayaa sheegay in ay masaajidka gaareen 4 daqiiqo ka hor kooxda intii uusan dhicin weerarka, kooxdana ay masaajidka ku sugnaan lahaayeen waqtigii uu dhacayay weerarka.
Wariye Maxamed Cisam oo ka tirsan taleefishinka ESPN ayaa sheegay in uu isaga la socday kooxda, ayna meesha ka baxsadeen markii ay rasaasta bilaabatay, iyaga oo ka baxay dhanka darkiinka, kadibna ay sii aadeen meel lagu badgalay.
“Ciyaartooyda waxa ay maqleen rasaasta, waxay ay arkeen dadka oo albaabka si halhaleel ah uga soo baxaya, qaarna baska ay hoos galeen” ayuu yiri.
Kooxda ayaa la ciyaari lahayd xulka dalka New Zealand maalinta sabtida ah, taas oo hadda la joojiyay.
Kooxda wada muslimiinta ah ayaa salaadda jimcada u aaday masaajidka Al NuurImage caption: Kooxda wada muslimiinta ah ayaa salaadda jimcada u aaday masaajidka Al Nuur
Posted at 10:08 15 Maarso 201910:08 15 Maarso 2019
Guddiga Yuhuudda ee New Zealand oo cambaareeyay weerarrada masaajidda
Stepehen Goodman oo ah madaxa guddiga ay leeyihiin bulshada Yuhuudda ah ee dalka New Zealand ayaa yiri “Ma jirto erayo lagu cabbiri karo sida Guddiga bulshada Yuhuuddu uu uga xun yahay ugana argagaxay weerarrada abaabulan ee maanta ka dhacay masaajidda Christchurch.”
Isaga oo la hadlaya wargeyska Jewish Chronicle ayuu intaas ku sii daray “Caawimaad iyo taageero buuxda ayaan siinaynaa bulshada Muslimka ah waana garab taagannahay marka ay timaaddo argagixisada iyo cunsuriyadda, waxaana waajib ah in aan samayno wax kaste oon awoodno si loogu ciqaabo New Zealand."
Posted at 9:37 15 Maarso 20199:37 15 Maarso 2019
Dalalka saaxiibbada la ah dalka New Zealand iyo kuwa kale ee ay dariska yihiin ayaa ka falceliyay weerarka lagu qaaday masaajidda, waxayna sheegeen in ay ka murugoodeen kana kana argagaxeen weerarradaas
Waa kuwan qaar ka mid ah dalalka dhacdadan ka hadlay:
Malaysia ayaa sheegtay in labo muwaadin ay kaga dhaawac meen weerarka. Wasaaradda arrimaha Dibadda ayaa sheegtay in ay cambaaraynayso “weerarkan macno la’aanta ah ee argagixisadu ku qaaday dadka aan waxba galabsan ee shacabka ah, ayna rajaynayso in sharciga la hor keeno dadkii falkaas foosha xun ka dambeeyay”.
Ra’iisulwasaaraha dalka Fiji Frank Bainimarama ayaa yiri "Qalbiga ayaa jaban dadka reer Fiji, waxaana la murugoonaynaa dadka aan walaalaha nahay ee reer New Zealand". Waxaa jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya in dadka dhintay uu ka mid yahay hal ruux oo u dhashay Fiji ama laga yaabo in ay intaas ka sii bataan.
Ra’iisulwasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay in dadkiisu ay “garab taagan yihiin dhammaan dadka reer New Zealand ee ku jira wakhtigan madaw ee nacaybka iyo rabshadahu ay ka xadeen nabadda.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Indonesia Retno Marsudi ayaa sheegtay in ay “aad u cambaaraynayso weerarka, iyadoo ay dadku ku jiraan masaajid ay ku tukanayeen.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Edogan ayaa sheegay “in weerarkan
uu yahay tusaalihii u dambeeyay ee cunsurinimada iyo Islaam nacaybka”.
Ra’iisulwasaaraha UK Thirisa May ayaa cambaaraysay “weerarkan xannuunka badan” waxayna dirtay tacsi.
Posted at 9:08 15 Maarso 20199:08 15 Maarso 2019
Duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa sheegay “in booliis muuqda” maanta la gayn doono agagaarka masaajidda iyadoo dadku ay aadayaan salaadda Jimcaha. Wuxuu intaas ku daray in askarta la gaynayo ay ka mid noqon doonaan ciidammada loo tababaray in ay ka jawaabaan weerarrada hubaysan.
“London waxay garab taagan tahay dadka magaalada Christchurch , xiligan ay wajahayaan weerarkan argagisada ee qaabka daran” ayuu soo qoray duqa magaalada London Sadiiq Khan.
Posted at 8:15 15 Maarso 20198:15 15 Maarso 2019
War deg deg ahDhimashada masaajidka New Zealand oo 49 maraysa
Dadka ku dhintay masaajidda Australia ayaa hadda noqday 49.
Taliyaha booliiska dalka New Zealand ayaa qabtay shir jara'id oo uu dadka kula wadaagayo wararkii ugu dambeeyay ee weerarka lagu qaaday dadka cibaadaysanaya.
Mid ka mid ah dadkii dhaawaca ahaa ee la dabiibayay ayay hadda naftu ka baxday ayuu yiri isaga oo shirka jaraa'id sii wada.
Posted at 8:04 15 Maarso 20198:04 15 Maarso 2019
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa tacsi u diray dalka New Zealand, isaga oo magaciisa iyo midka dalkiisa ku hadlaya, wuxuuna cambaareeyay ciddii Muslimiinta masaajidka ku laysay.
Toogashada ayuu ku tilmaamay in ay tahay “wax aad loo dhaleeceeyo” wuxuuna intaas ku daray in ay tahay tallaabadii u dambaysay ee cusnsuriyadda iyo Islaam nacaybka sii kordhaya.
Posted at 7:13 15 Maarso 20197:13 15 Maarso 2019
Isbitaal dabiibaya 48 ruux oo dhaawac ah
Afartan iyo sideed ruux oo dhaawac ah yaaa lagu dabiibayaa isbitaal ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka New Zealand.
Dadkan ayaa ku dhaawacmay weerarradii masaajidda lagu qaaday
David Meates oo ka mid ah masuuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in dadka dhaawaca ah ay isugu jiraan carruur iyo qaangaar kuwaas oo qaba dhaawacyo rasaas.
Posted at 6:54 15 Maarso 20196:54 15 Maarso 2019
War deg deg ahAfartan ruux oo lagu dilay masaajiddo ku yaalla New Zealand
Afartan ruux oo Muslimiin ah ayaa lagu dilay masaajiddo sida ay sheegtay Ra'iisulwasaaraha New Zealand.
Posted at 6:46 15 Maarso 20196:46 15 Maarso 2019
Australia oo ka qaybqaadanaysa baaritaanka weerarka
Scott MorrisonImage caption: Scott Morrison
Qof Australia u dhashay ayaa la sheegay in uu qayb ka ahaa weerarka lagu qaaday masaajidda ku yaalla dalka New Zealand
Ra'iisulwasaaraha Australia ayaa cambaareeyay weerarka ka dhacay dalka New Zealand.
"Waxaan xaqiijin karaa in shaqsiga xabsiga ku jira la ii sheegay in uu Australi u dhashay, sidaas daraadeed Australia ayaa qayb ka ah baaritaanka la wado, dhammaan laamaha ku shuqul lehna baaritaanka wayna sii wadi doonaan" ayuu yiri Ra'iisulwasaaraha Australia Scott Morrison.
Posted at 6:38 15 Maarso 20196:38 15 Maarso 2019
Ra'iisulwasaaraha New Zealand oo cambaaraysay weerarka
Ra'iisulwasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa cambaaraysay weerarka lagu qaaday labada maajid.
Dhibaatada loo gaystay dadka cibaadaysanaya ayayna ku tilmaantay "mid ka mid ah taariikhda ugu madaw ee dalka Soo martay.
Posted at 6:30 15 Maarso 20196:30 15 Maarso 2019
Sawirro laga soo qaaday masaajidka Al Nuur
Sawirradii u dambeeyay ee naga soo gaaray bannaanka masaajidka Al Nuur ee weerarka lagu qaaday.
Posted at 6:22 15 Maarso 20196:22 15 Maarso 2019
“Dhiig daadsan masaajidka”
Muuqaallo naxdin ah ayaa ka soo baxaya masaajidka dadka lagu laayay ee ku yaalla dalka New Zealand.
Dad kala duwan ayaa sheegay in dadka dhaawacmay ay ka mid yihiin carruur.
Qof goob jooge ah ayaa warbaahinta stuff.co.nz u sheegay in isaga oo ku tukanaya masaajidka Al Nuur uu maqlay rasaasta. Wuxuu sheegay in uu arkay xaaskiisa oo dhulka jiifta oo mayd ah.
Nin kale ayaa sheegay in uu arkay carruur rasaas lala dhacay “Dhiig ayaana meel walba daadsanaa” ayuuna intaas ku sii daray.
Qof goobjooge ah ayaa Idaacadda New Zealand u sheegay in uu maqlay rasaas uuna arkay afar ruux oo dhulka yaalla iyo “dhiig meelwalba daadsan”.
Waa maalin Jimco ah oo taariikhdu tahay 15 bisha Maarso sannadka 2019.
Posted at 13:12 14 Maarso 201913:12 14 Maarso 2019
Algeria oo yeelatay xukuumad cusub oo ku meelgaar ah
Ra’iisulwasaaraha cusub ee Algeria iyo ku xigeenkiisa ayaa ballan qaaday in dhallinyarada iyo dumarku ay qayb ka noqon doonaan xukuumadda cusub.
Madaxwene Abdelaziz Bouteflika ayaa saddex maalmood ka hor ku dhawaaqay in uusan xilka isu soo taagi doonin markii shanaad. Balse dad badan oo reer Algeria ah ayaa doonaya in uu durba is casilo.
Labada masuul ee dalka loo magacaabay oo kala ah Ramtane Lamamra iyo Noureddine Bedoui ayaa isku dayaya in ay dajiyaan xiisadda ka taagan dalka, waxayna sheegeen in madaxweyne Bouteflika uusan rabin in uu xilka sii hayo, isla markaasna uu aad u koob naan doono xilliga kala guurka ah oo uusan hal sano ka badan doonin.
Madaxweyne Bouteflika ayaa xilka hayay muddo 20 sano ah wuxuuna xafiiska sii joogi doonaa inta doorasho laga qabanqaabinayo.
Balse wali wakhti lama cayimin, qaar badan oo shacabka ka mid ahna waxay shaki ka qabaan muddada la qaban doono.
Dadka reer Algeria ee waddooyinka ku sheekaysanaya ayaa sidoo kale doonaya in ay xukunka ka dagaan xulafada madaxweynaha ku xeeran.
Masuuliyiinta ayaa isku dayaya in ay cabashooyibkaas wax ka qabtaan,waxayna mucaaradka ugu baaqayaan in ay ka qayb qaataan, waxayna sheegeen in masuuliyiinta dawladda cusub ay noqon doonaan aqoon yahanno.
Posted at 12:20 14 Maarso 201912:20 14 Maarso 2019
Madaxa xiriirka kubbadda cagta ee Afrika oo Maraykanka laga hor istaagay
Madaxa Xiriirka Kubadda Cagta ee Afrika Axmed Axmed ayaa loo diiday dal ku galka dalka Maraykanka halkaas oo uu safar ku tagi lahaa si uu uga qayb galo kulan ay leeyihiin masuuliyiin Xiriirka Kubbada Cagta Adduunka ee FIFA.
Ma cadda sababta dal ku galka loogu diiday.
Afhayeen u hadlay Xiriirka Kubbadda Cagta Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo CAF ayaa BBC-da u sheegay in Axmed uu Khamiista ku sugnaan doono Qaahira.
Posted at 11:28 14 Maarso 201911:28 14 Maarso 2019
Saxafi reer Koonfur Afrika ah "oo cunsurinimo loo jir dilay"
Samora Mangesi oo soo jeediye ka ah idaacad iyo telefeshin ka soo baxa dalka Koonfur Afrika ayaa la sheegay in cunsurinimo loo jir dilay, ka dib markii uu isku dayay in uu caawiyo dhallinyaro caddaan ah oo gaarigoodii shil ka galay.
Arrintan ayaa habeenno ka hor ka dhacday magaalada Roodepoort.
“Aniga iyo saaxiibkay ‘ayay noogu yeereen daanyeerro’. Markii aan waydiinay sababta ay sidaas u sameeyeenna, way igaaraaceen ilaa aan ka miyir daboolmay,” ayuu Mangesi ku soo qoray Twitterkiisa.
Posted at 11:10 14 Maarso 201911:10 14 Maarso 2019
Caro ka dhalatay lacagta ku baxday darbiga laga dhisay xadka Kenya iyo Soomaaliya
Xildhibaannada dalka Kenya ayaa ka carooday in dawladdu ay 35 milyan oo doolar u adeegsatay darbiga 10 kiiloo mitir ah ee ay ka dhistay xadka Kenya iyo Soomaaliya si loo hor istaago dagaalameyaasha Al Shabaab ee xadka ka soo tallaaba.
Xildhibaannada ayaa rumaysan in dad ka shaqeeya wasaaradda ammaanka ay fursad ka dhigteen halista ka imaanaysa Al Shabaab si ay u xadaan lacagta dadwaynaha.
Faahfaahinta kharashka ku baxay ayaa la ogaaday ka dib markii warbixin rasmi ah la horgeeyay xildhibaannada Arbacadii.
Soddon iyo shantaas milyan ayaa ka dhigan in halkii kiiloo mitirba lagu dhisay 3 milyan oo doolar, dhismaha darbiga ayaana ka kooban tiirar shub ah iyo silig shabaq ahaan u samaysan.
Lacagtan ayaana ka badan kharashka ay dawladdu u qoondaysay istaraatiijiyaddeeda kaydka cuntada sannad miisaaniyadeedka 2018-2019
Lacagtan ayaa sidoo kale hal milyan ka badan kharashka ay dawladdu u qabatay hannaan caafimaad oo caalami ah oo dalka oo dhan laga hir galinayo.
Lacagtan ayaa sidoo kale saddex jeer ka badan kharashka loo qabtay in dawladdu ay ku dhisto guryo aan qaali ahayn oo la goyn karo.
Haddii ay kiiloo mitiro ku sii daraan waxay ku kici 43 milyan taas oo la sinnaani lacagta ay Kenya u isticmaalayso sannadkan barnaamijka umulinta bilaashka ah.
Dawladda ayaa markii hore ku dhawaaqday in ay dhisayso 700km oo darbi ah si Al shabaab looga hor istaagi in ay xadka ka soo tallaabaan, taas baddalkeedana dawladdu waxay 2015kii billawday darbi shabaq ah.
Dawladdu wali kama jawaabin walaaca ka soo yeeray xildhibaannada, qaar kalana waxay su’aal galiyeen caqliga ka dambeeya in darbi shabaq ah lagula dagaallamo argagixiso.
Halkan ka daawo warbixin hore oo Bashkas Jug soo dhacay uu ka diyaariyay xadka Kenya Soomaaliya ee darbiga laga dhisayo.
Posted at 9:17 14 Maarso 20199:17 14 Maarso 2019
Haweenay hoy la aan ah oo ku dhashay beer shacabku ku nasto
Haweenay hoy la’aan ah ayaa canug ku dhashay beer nasasho ama jardiino caan ah oo ku taalla magaalada Nairobi ee caasimadda u ah dalka Kenya, arrintaas ayaana dhalisay caro ay dareemayaan dadka Kenyanka ah kuwaas oo u arka in dawladdu ay ka gaabisay sidii ay gabadhan ku heli lahayd baxnaano caafimaad.
Wargayska gaarka loo leeyahay ee The Standard ayaa ayaa ku warramay in Rebecca Atieno oo 20 jir ah ay ku dhashay beerta xorriyadda ee Uhuru Park, iyada oo rabta in ay ku nafisto ka dib markii Talaadadii laga soo eryay huteelkii ay ka shaqaynaysay.
Wargeyska ayaa sheegay in Atieno sidoo kale laga soo saaray huteelkii ay degtay ka dib markii ay ku guuldarraysatay in ay bixiso wax ka yar hal doolar oo looga baahnaa.
Gabadha dhalatay ayaa loo bixiyay Hope oo macnahedu yahay Rajo.
Dadka Kenya ee Twitterka isticmaala ayaa ka falceliyay warkan oo yimid wax yar ka dib markii Kenya ay qabatay orad lagu dhiirigalinayo umulinta bilaashka ah.
Dadka baraha bulshada isticmaala ayaa barasaabka Nairobi ugu baaqay in bilaash laga dhigo musqulaha dadwaynaha, ka dib markii la sheegay in gabadha umusha ah ay awoodi wayday in ay bixiso lacagtii musqusha rahan ahaana looga reebay taleefankeedii.
Shaqaale gargaar ayaa sheegay in ay Atieno ka caawiyeen in ay si nabad ah u dhasho ka hor intii aysan u sii qaadin isbitaalka Kenyatta.
Posted at 8:37 14 Maarso 20198:37 14 Maarso 2019
Gabadh Soomaali ah oo baarashuud ka soo booda
Meyran Cumar waa gabadh Soomaaliyeed ee dagan Minneapolis Minnesota ayaa dhawaan baratay sida baarashuudka looga soo boodo ,horeyna waxay Meyran u baratay wadida diyaaradaha yaryar, waxay ka sheekaynaysaa waxa ku kalifay , iyo caqabadaha ay soo martay